Google Tsvaga Console Yakatyisidzira Bhurezi mukati Me! | Martech Zone
Svondo, October 26, 2014 China, Kurume 25, 2021 Douglas Karr
Tave tichishanda masikati neusiku tichigadzirira Martech shanduko iri kuuya yekugadzira. Basa rakabatanidza kudzokera kumashure kuburikidza nemazana mana emablog mablog - tichivimbisa kuti takaratidza mifananidzo, zvirimo hazvisi zvechinyakare (semapuratifomu akabuda mubhizinesi), uye nekuona kuti hatina mamwe matambudziko asinganzwisisike… senge zana zana kuti ini ndakanganisa iyo html encoding yemakodhi snippets, uye nezvimwe zvakawanda. Isu takaitawo backlink odhita uye takaburitsa toni yenzvimbo dzekupenga dze spam dzaive dzichinongedzera kwatiri.
Imwe yekuwedzera yekuwedzera ndeyekuti isu takaisa iyo SSL chiiti mukugadzirira kwechimwe chizvarwa chinotungamira uye nesarudzo dzeecommerce tichave tichiwedzera kune saiti. Pasina kutaura kuti Google yakaratidza kuti kuve nenzvimbo yakachengetedzeka kunogona kukanganisa maitiro mune ramangwana. Shanduko dzese dzandanga ndichiita dzave nemhedzisiro. Muchokwadi, mumwedzi wapfuura yedu yekutsvaga injini traffic yakapetwa kaviri. Heino skrini kubva Semrush:
Isu zvechokwadi hatina nguva yakawanda yekushanda paMartech seizvi sezvo isu tiri kushanda kuti tione kuti ese edu evatengi 'saiti akagadziridzwa. Sechikamu chedu maitiro, ndanga ndichishandisa akati wandei maturusi kukwenya saiti kutsvaga nyaya, uye ndagadzirisa dzimwe nyaya dzinoshamisa idzo Google Search Console yaburitsa… semadupleate mazita, nezvimwe.
Saka… fungidzira maitiro angu pandakapinda mukati Google Search Console vhiki ino ndikaona izvi:
Ndakatarisa zvikanganiso muWebmasters uye zvikanganiso zvakadzika zvakanyanya. Ndakaongorora nekutarisisa zvangu CMS SEO yekutarisa - robots.txt faira, mepu dzamepu, zvandinodzorera… zvese! Ndakaongorora chero mameseji (semuenzaniso chirango) uye pakanga pasina mameseji akatumirwa kwandiri. Kunyangwe ini ndakasununguka, handigone kubatsira asi kushamisika kana paine chakakanganisika neWebmasters.
Uye zvakazouya kwandiri… ko kana Google Search Console yaida nzira yakachengeteka kunzvimbo iyi? Saka ndakanyoresa http:s: //martech.zone panzvimbo ye http://martech.zone. Ini pachokwadi ndaisatombo fanirwa kuchinja iyo yemusoro tag. Hezvino zvakabuda.
Google… iwe unotya zvachose ini. Ini ndaifunga kuti ndanga ndaita chimwe chinhu chakaipa kune yangu saiti zvekuti ini ndaivhara kutsvaga zvachose. Wee!
Tags: google webmasterszvishandiso zveGoogle webmastershttp seohttps seohttps webmastersseo isiri-sslseo sslssl maringe asiri-ssl seossl vatenzi vewebhuwebmaster maturusiWebmasterwebmasters httpswebmasters ssl